ထုံဆေးမေ့ဆေးသုံး သွေးထိန်းသိမ်းနည်းလမ်းများ | ခွဲစိတ်စဉ်ကာလ စောင့်ရှောက်မှု
ဒေသခံ ကိုယ်စားလှယ်​ကို ဆက်သွယ်ပါ
Greater peripheral blood flow but less bleeding with propofol versus sevoflurane during spine surgery:apossible physiologic model? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(18):2017-22.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 18708936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18708936 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Controlled hypotension:aguide to drug choice. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Drugs 2007;67(7):1053-76.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 17488147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17488147 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Controlled hypotension for spinal surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Eur Spine J 2004;13 Suppl 1:S66-71.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 15197633
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15197633 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Magnesium sulphate asatechnique of hypotensive anaesthesia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Br J Anaesth 2006;96(6):727-31.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 16670112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16670112 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Effect of induced hypotensive anaesthesia vs isovolaemic haemodilution on blood loss and transfusion requirements in orthognathic surgery:aprospective, single-blinded, randomized, controlled clinical study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2010;39(12):1168-74.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 20961738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20961738 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
The safety of controlled hypotension for shoulder arthroscopy in the beach-chair position. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: J Bone Joint Surg Am 2012;94(14):1284-90.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 22810398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22810398 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Influence of controlled hypotension versus normotension on amount of blood loss during breast reduction. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: J Plast Reconstr Aesthet Surg 2009;62(2):200-5.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 18054305
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18054305 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Hypotensive resuscitation strategy reduces transfusion requirements and severe postoperative coagulopathy in trauma patients with hemorrhagic shock: preliminary results ofarandomized controlled trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: J Trauma 2011;70(3):652-63.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 21610356
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21610356 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Induced hypotension with epidural/general anesthesia reduces transfusion in radical prostate surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Can J Anaesth 2006;53(9):873-80.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 16960264
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16960264 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Laparoscopic and robotic partial nephrectomy with controlled hypotensive anesthesia to avoid hilar clamping: feasibility, safety and perioperative functional outcomes. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: J Urol 2012;187(4):1190-4.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 22335869
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22335869 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Deliberate hypotension in orthopedic surgery reduces blood loss and transfusion requirements:ameta-analysis of randomized controlled trials. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Can J Anaesth 2007;54(10):799-810.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 17934161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17934161 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
High Le Fort I and bilateral split sagittal osteotomy in Crouzon syndrome. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: J Craniofac Surg 2013;24(3):e253-5.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 23714981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23714981 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ခြေ၊ လက်တစ်ဘက်ဘက်ကို ထုံဆေးပေးခြင်း
The effect of neuraxial blocks on surgical blood loss and blood transfusion requirements:ameta-analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: J Clin Anesth 2006;18(2):124-8.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 16563330
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16563330 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
A comparison of neuraxial block versus general anesthesia for elective total hip replacement:ameta-analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Anesth Analg 2006;103(4):1018-25.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 17000823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17000823 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Comparison of outcomes of using spinal versus general anesthesia in total hip arthroplasty. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Am J Orthop (Belle Mead NJ) 2007;36(7):E101-6.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 17694193
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17694193 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Comparison of hypotensive epidural anaesthesia and spinal anaesthesia on blood loss and coagulation during and after total hip arthroplasty. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Acta Anaesthesiol Scand 2000;44(4):457-64.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 10757582
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10757582 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Anaesthesia for hip fracture surgery in adults. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD000521.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 15494999
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15494999 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Does neuraxial anesthesia reduce intraoperative blood loss? A meta-analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: J Clin Anesth 2006;18(6):427-35.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 16980159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16980159 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Reduction of postoperative mortality and morbidity with epidural or spinal anaesthesia: results from overview of randomised trials. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: BMJ 2000;321(7275):1493-7.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 11118174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11118174 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Comparative perioperative outcomes associated with neuraxial versus general anesthesia for simultaneous bilateral total knee arthroplasty. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Reg Anesth Pain Med 2012;37(6):638-44.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 23080348
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23080348 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ယေဟောဝါ​သက်သေ လူနာ​တွေကို ကုသ​ပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ အခမဲ့​ကူညီပေး​နေတဲ့ ဒီ​ကိုယ်စားလှယ်​တွေကို အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်​နိုင်ပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့​အကြောင်းအရာများ–သွေး​ထွက်​လွန်​ရောဂါ​နဲ့ သွေးအားနည်း​ရောဂါ​ကို သွေးမသွင်း​ဘဲ ကုသနည်း​များ၊ ဆေး​ကုသမှု​အပေါ် ယေဟောဝါသက်သေတွေရဲ့ ဘာသာရေး​နဲ့ ကျင့်ဝတ်​စံနှုန်းများ၊ ကမ္ဘာချီ​ဆေးရုံ​ဆက်သွယ်ရေး​ကော်မတီ​တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ။
ယေဟောဝါ​သက်သေ​လူနာ​တွေကို ကုသ​ပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တွေ​အတွက် ဆေးပညာ​နဲ့ ကျင့်ဝတ်​ဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်​တွေ အပါအဝင် ကုသ​နိုင်တဲ့​နည်းလမ်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
JW.ORG မှာ​တင်ထားတဲ့ ဆေးပညာ​ကဏ္ဍရဲ့ အဓိက​ရည်ရွယ်ချက်​က ဆရာဝန်တွေ​နဲ့ ဆေး​ဘက်​ဆိုင်ရာ​ကျွမ်းကျင်သူတွေ လိုအပ်တဲ့​အချက်အလက်​တွေ​သိအောင် ဖော်ပြ​ပေးထား​တာ​ဖြစ်ပြီး ဆေး​ဘက်​ဆိုင်ရာ အကြံ​ပေးတာ၊ ကုသနည်း​တစ်မျိုးမျိုးကို ထောက်ခံ​တာ၊ ဆေး​ဘက်​ဆိုင်ရာ​ကျွမ်းကျင်သူတွေ​ရဲ့​နေရာကို အစားထိုး​တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရည်ညွှန်း​ထားတဲ့ ဆေးပညာ​စာပေတွေက​လည်း ယေဟောဝါသက်သေတွေ ထုတ်​ထားတာ​မဟုတ်ပါဘူး။ ထည့်သွင်း​သုံးသပ်​သင့်တဲ့ သွေးမဲ့​ကုသနည်း​တွေကို ဒီ​ကဏ္ဍ​မှာ အကြမ်းဖျင်း​ဖော်ပြ​ထားတာ ဖြစ်တယ်။ အချက်အလက်​အသစ်တွေ အမြဲ​သိနေ​ဖို့၊ ကုထုံး​တွေ​အကြောင်း ရှင်းပြ​ပေးဖို့၊ ကျန်းမာရေး​အခြေအနေနဲ့​ပတ်သက်ပြီး လူနာ​ရှင်​တွေရဲ့ ဆန္ဒ၊ ဘာသာရေး​ယုံကြည်ချက်​အတိုင်း လုပ်ဆောင်​ပေးဖို့​က ဆေး​ဘက်​ဆိုင်ရာ​ကျွမ်းကျင်သူ​တစ်ဦးချင်းစီရဲ့​တာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ​ကဏ္ဍ​ထဲ​က အကြံပြုချက်​အားလုံးဟာ လူနာ​အားလုံး​အတွက် သင့်တော်​တာ၊ လက်ခံနိုင်စရာ ဖြစ်ချင်​မှ​ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
လူနာများ– ကျန်းမာရေး​အခြေအနေ၊ ကုသနည်း​တွေ​နဲ့​ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်တွေ၊ ဆေး​ဘက်​ဆိုင်ရာ​ကျွမ်းကျင်သူတွေ​နဲ့ အမြဲ​ဆွေးနွေးပါ။ ကျန်းမာရေး​မကောင်း​ဘူးလို့​ထင်ရင် ဆရာဝန်​နဲ့​ပြပါ။